BBC inoedza nth nguva yekudzikisa UK basa muuranda - teles kudzokorora
BBC inoedza umpteenth nguva kudzikisa UK nzvimbo muuranda
Sei iyo BBC yakadhindisa chinyorwa chinorumbidza wezana ramakore rechi XNUMX Nigerian mutengesi mukati mevaratidziro yepasi rose yeBM?
MunaChikunguru 2018, mutori venhau wekuNigeria uye munyori Adaobi Tricia Nwaubani vakanyora murume akatendeseka, anodudzira uye anovhenekera murume. chinyorwa nezve hupenyu hwasekuru vake vanononoka semutengesi wezana ramakore rechi 19 akatengesa hupenyu hwake.
Muchidimbu chakakura chakaburitswa neNew Yorker, Nwaubani akataura nyaya dzinonakidza pamusoro pemhuri, tsika dzeIgbo, hutapwa, uye hutongi hwezvematongerwo enyika. Akatsanangura sei sekuru vake, Nwaubani Ogogo Oriaku, vakawana hupfumi nehunyanzvi panguva yekutengeserana kwevaranda nekutengesa vamwe vatema uye kubatsira mamishinari kutanga Chikristu kuNigeria.
Akapawo nhoroondo yakatendeseka neinonzwisisika yemanzwiro anopesana ayo vazhinji vepedyo naye nezvegariro rasekuruasekuru vake.
Akatiudza kuti baba vake vakamboti sei haanganyadzise pamusoro peiye anotengesa muranda akashata. "Nei ndichifanira kudaro," akamupindura, "Bhizinesi rake raive riripo panguva iyoyo. Airemekedzwa nemunhu wese.
Asi iye anyorawo nezvehama dzake dzinozviona zvakasiyana. Iye akatiudza nezve hama yake Chidi, akakurira muEngland uye akasarudza kuvanza mhuri yake yehukama kubva kushamwari dzake dzeBritain. Akanyora futi nezveimwe hama, Chiomia, uyo anoti anokumbira "Mwari tiregerereiwo madzitateguru edu" nguva dzese pavanoona bhaisikopo rehuranda.
Muhurukuro iyi, Nwaubani akaratidza kuedza kwemhuri yake kuti abve munhoroondo yake inorwadza neyakaora. Akataura kuti muna 1992, vachitenda kuti vari kurangwa nekuda kwemhosva dzemadzitateguru avo, nharaunda iyo mhuri yake inobva kubva vakasarudza kutora zita idzva kuratidza kwavo "kusiya hunhu hwekare." Iye zvakare akadada akarondedzera zvakadzama mhemberero yekununurwa iyo mhuri yake yakaibata muna Ndira 2018 kuti ataure pachena basa rake mukutengeswa kwevaranda. "Panguva yemhemberero iyi, ndakafaranuka," Nwaubani akafunga mumoyo make, "Mhuri yangu yakazopedzisira yatora danho kupfuura rekuzevezera nekunetseka.
Maererano nenhoroondo yaNwaubani muNew Yorker, mhuri yake yakaramba muedzo kugamuchira sekuru vavo sechigadzirwa chenguva yavo, vakatora tsika yakasimba pauranda uye vakaparara zvachose kubva kunhaka yake inosemesa.
Kana chinyorwa ichi chingadai chakaramba chiri nhoroondo yaNwaubani chete yenhoroondo yemhuri yake, zvinogona kunge zviri zvake kupa kwechokwadi kuedza kwakatendeka kunyangwe imwe yenguva dzinorwadza zvikuru munhoroondo yevanhu. Aigona kuve akatsungirira seyakasimba, yakangwara uye yakasarudzika ongororo yekutengeswa kwevaranda kubva mumaonero eAfrica. Zvikuru kudaro, mumamiriro ezvinhu ezvematongerwo enyika anofambira mberi nhasi, aigona kuve akapa muenzaniso wenzira iyo mhuri, nharaunda pamwe nemagariro vaigona kutarisisa nokutadza mhosva dzemadzitateguru avo uye nokuzvidzikunura kubva pakuremerwa kwekusarongeka kwenhoroondo. .
Asi, zvinosuruvarisa, izvi hazvisizvo.
Musi waChikunguru 19, mavhiki manomwe chete mushure mekuurayiwa kwemapurisa kwaGeorge Floyd kuMinnesota kwakonzera kusarudzika kurudzi rwenyika, Nwaubani akasarudzazve kutaura nyaya yababamukuru vake, izvi dzimwe nguva paBBC. Itsva chinyorwa , yakanzi "Babamukuru vangu vatengesa varanda", ine mutsva wekutarisa yekunyora uye haambotauri nezvekuedza kwemhuri yake kuchengeta nhaka yemuridzi wenhaka.
Panguva ino, mutori venhau wekuNigeria anorondedzera sekuru vake kwete seumwe munhu "akawana simba nehupfumi nekutengesa vamwe maAfrika mhiri kweAtlantic", asi achingoti "muzvinabhizimusi" ndiani akararama munguva iyo "iyo yakakodzera yakapukunyuka uye iyo bravest yakakunda".
Iko hakuna zvakare kutaurwa nezve kushungurudzika kunoshungurudza kune hutapwa hwaakasangana nemhuri yake. Nekuda kweizvozvo, hapana chiratidzo cheicho chakazara, hutsika hunofambira hwaive nechinyorwa cheNew Yorker.
Zviripachena, kusiyana nechinyorwa chepakutanga chakaburitswa makore maviri apfuura, chinangwa chechinyorwa cheBrian hachisi chekurondedzera kurwira kwemhuri kusvika pakubata nemabasa akaipa aiyeye wedzinza, asi kupa kuzvidzivirira kuna tateguru uyu nekutaura kuti vatariri vevaranda zuro havafanirwe kutongwa nemhando dzehunhu hwanhasi.
Uranda - Timothée de Fombelle: "Imwe neimwe iri kubviswa ...
Tarisa pane indasitiri yekutengesa vanhu mu…
Kubva paMalcolm X kuenda kuDongala, iyo Pan-Africa kusarudzwa kwechitoro chemabhuku ...
Mune chinyorwa cheBBC, mukuedza uye kwekuvhundutsa kuedza kukudza murume akatengesa vanhu kuti awane chouviri, Nwaubani anotogovana anecdote inoratidza sekuru vake segamba kuti akwanise kusangana nevakuru vehurumende yeBritain yekoloni mushure mevaranda vake ".
Chinyorwa cheBrian hachiyese kungoita chena chete nhaka yaNwaubani Ogogo Oriaku, asi zvakare inoedza kupomera kutengeswa kwevaranda nevatema. Anoti "kutengwa nekutengeswa kwevanhu pakati peIgbo kwakaitwa nguva refu kusati kwauya vanhu veEurope" uye zvinoreva kuti kusvika kwevanhu veEurope kwakangomutsa tsika iripo uye yakatangwa. Mukuita kudaro, chinyorwa chinonyatso tarisira jouer pabasa reUK rekutengesa vanhu vanofungidzirwa kuva 11-14000000, XNUMX veAfrica, vazhinji vakafira pagungwa, kana nemaoko evanotsamwa, vanovenga vanomhanyisa mhomho kana vatungamiriri vevaranda vane hutsinye muAmerica.
Mune chinyorwa chake cheBBC, Nwaubani haapi chete fungidziro yekuti uranda chaihwo hwaingova hwekuvaka kweAfrica, asi iye anopawo mbiri kuUK yekuzvipedza. Pasina rubatsiro rweakavhenekerwa uye ane tsitsi eWushe hweBritain, Nwaubani anotenda, kutengeswa kwevaranda kungadai kusipo jamais zvapera. Kuchinjana, anofunga, dai vaIgbos vaidanana nemifananidzo, sekuru vake zvirokwazvo vangadai vakavakirwa mumwe mukuremekedzwa kwake.
Saka sei Nwaubani akafunga kuudza nyaya yasekuru vake uye kumupa chidziviriro panguva iyo kushevedzera kweBlack Live Matters kurwira rusununguko kwatanga kwatanga kunzwiwa wepasi rese? Uye nei iyo BBC akasarudza kuti ave nebasa rekununura kudzikisira kwakakuvadzwa kudada nekuderera kwehunhu hweHurumende yeBritain nechinhu chinopa mbiri kumuzana wegumi nemana wechiNigean mutengesi wenguva panguva yakakura kudaro munhoroondo. ?
Nwaubani yakagadziridzwa uye inodzivirira zvakanyanya nhoroondo yehupenyu hwasekuru vake sekuru vanofa vekuda kuchengetedza rusununguko. Zvinoyeuchidza nezveMutungamiriri waDonald Trump kusuwa kwekuedza kunyorazve nhoroondo uye kupa varidzi vevaranda uye mhondi vazhinji vakaumba zvakapfuura America se "vanhu vakanyanya kusatya uye vakashinga vanhu vakambopindamo." Chiso cha pasi ".
Mukubatana kwake neBBC, arikuyedza kuregedza iyo UK kubva kune basa rayo rekutanga mukusimudzira kutengeswa kwevaranda, kuvaka dzimba dzemakoloni muAfrica uye kusimudzira nzvimbo dzehumambo. munyika.
Nekuda kwehuranda hweBritain nehuranda, iyo BBC inonakidzwa nekusvika ku Africa kuburikidza ne terevhizheni, radio uye online mapuratifomu. Inzwi rakavimbika uye rakakurumbira muAfrica. Nekudaro, sekunyorwa kwechinyorwa chaNwaubani, kunyangwe panguva iyo mhepo yekuchinja nekukurumidza zvishoma nezvishoma iri kuvhuvhuta nyika, iye haakwanise kuramba kuzvidzivirira kwekudzivirira chitambi cheUK kuramba Ziva basa rayo rinotungamira mukutengeswa kwevaranda kwemazana emakore. .
Yakanga isiri iyo kusvika 2015 iyo le Mutungamiriri weBritain panguva iyoyo, David Cameron, akaudza maJamaican kuti "buda" mu "gumbo rinorwadza reuranda" apo vachirumbidza basa reUnited Kingdom mukuparadza kutengeswa kwevaranda. of Varanda. Mutungamiriri wekare, Boris Johnson, anozivikanwa nekuyemura kwake Hushe hweBritain uye nekuedza kwaakaita kuramba basa re Great Britain muuranda .
Kupokana neruzivo urwu, zviri nyore kunzwisisa kuti nei BBC yakafunga kuburitsa chinyorwa chaNwaubani chinoratidza uranda sechivakwa cheAfrica senyika yakatarisana neiyo nyika yeUK yekoloni.
Kuedza kweavo vanowana vanowana vanobatsira vekutengesa vatengesi vekutenderera kuti vadzore mhepo dzekushanduka, zvisinei, hakuna zvakunobatsira.
Les zvidhori zvevatengesi vevaranda, varume vakaita saEdward Colston, mutengesi wekuBritain akaita hupfumi hwake kuburikidza nekutengeswa kwevaranda mukupera kwema 1600s, vanobatwa nechisimba muUSA, kuUK nedzimwe nyika dzakasiyana siyana dzeEuropean. United States iri kudzokororodza hutsinye hwayo hwekupedzisira uye hwazvino maitirwo kumapurisa, rusaruraganda, uye hupenyu hwevatema. Izvo zvakafanana zvinoenda kuHollywood studio. Izvo zvakafanana zvinoenda zvakakura makambani, se Facebook neNetflix.
Izvo zvakafanana zvinoenda Africans Zvese mavara .
Hapana izvo zvinobudiswa neBR hazvitombo nyararidza manzwi kudana kuUK kuti vateerere nhoroondo yavo refu yeutsinye.
kunobva: https: //www.aljazeera.com/indepth/opinion/bbc-latest-attempt-play-uk-role-slavery-200730095612890.html
Uganda poacher inowana makore 11 mutorongo